Baabtiisku waa xafladda soo bandhigista masiixiga (Bilow). Rooma 6, Bawlos wuxuu caddeeyay inay tahay munaasabad lagu caddeeyo nimcada xagga rumaysadka. Baabtiisku ma ahan cadowga toobadda ama aaminaadda ama beddelaadda - waa shuraako. Axdiga Cusubi, waa axdiga u dhexeeya nimcada Ilaah iyo jawaabta (Falcelin) nin. Waxaa jira KALIYA baabtiis (Efesos 4: 5).
Waxaa jira saddex waji oo horudhac ah oo ay tahay in laga helo isbarashada Masiixiyiintu inay dhammaystirto. Dhammaan saddexda dhinac ma ahan inay dhacaan waqti isku mid ah ama isku nidaam ah. Laakiin dhammaantood waa lagama maarmaan.
Toobad keena iyo iimaanku - waa dhinaca bani aadamka ee horudhaca masiixiga. Waxaan qaadanay go'aanka ah inaan aqbalno Masiixa.
Baabtiisku waa dhinaca kaniisadda. Murashaxa baabtiiska waxaa loo aqbalaa bulshada muuqata ee Kaniisadda masiixiga.
Hadiyadda Ruuxa Quduuska ah - waa dhinaca rabaani ah. Ilaahay noogu soo hagaaji.
Ku baabtiiso Ruuxa Quduuska ah
Waxaa jira 7 tixraac oo keliya oo ku saabsan baabtiiska Ruuxa Quduuska ah ee Axdiga Cusub dhexdiisa. Dhammaan arrimahan oo dhan waxay sharraxayaan - iyada oo aan laga reebin - sida qof u noqdo Masiixi. Yooxanaa wuxuu dadka ku baabtiisay inay toobad keenaan, laakiin Ciise wuxuu ku baabtiisay Ruuxa Quduuska ah. Taasi waxay ahayd wixii Eebbe sameeyay maalintii Bentakostiga weligiisna wuu shaqeynayay illaa iyo markaas. Meel kale oo Axdiga Cusub ma jiro ereyga baabtiiska ee loo adeegsaday ama Ruuxa Quduuska ah lagu sharaxayo qalabka kuwa awoodda gaarka ah leh ee horay Masiixiyiin u ahaa. Had iyo jeer waxaa loo adeegsadaa weedh tusaale ah oo ku saabsan sida loo noqdo Masiixi gabi ahaanba.
Soo gudbinta waa:
Mark. 1: 8 - marinnada isku midka ah waxay ku jiraan Matth. 3:11; Luk. 3:16; Yooxanaa 1:33
Falimaha Rasuullada 1: 5 - halka Ciise muujinayo farqiga u dhexeeya baabtiiskii Yooxanaa pre-Christian baabtiiskiisa iyo baabtiiskiisa Ruuxa Quduuska ah, oo wuxuu ballan qaadayaa dhammaystir deg deg ah oo ka dhacay Bentakostiga.
Falimaha Rasuullada 11:16 - tan ayaa dib loogu celinayaa taas (eeg kor) iyo mar labaad si cad oo hordhac ah.
1 Kor. 12:13 - waxay cadeyneysaa inay tahay Ruuxa marka hore dadka ku baabtiisa Masiix.
Waa maxay beddelidu?
Waxaa jira 4 mabda 'guud ah oo quseeya baabti kasta:
Ilaah wuxuu taabanayaa qofka damiirka (waxaa jira wacyigelin baahi iyo / ama dambiile ah).
Ilaah nuur maskaxda (fahanka aasaasiga ah ee macnaha geerida Masiixa iyo sarakiciddiisa).
Ilaahay taabashada dardaaranka (waa inaad go'aan gaartaa).
Ilaah wuxuu bilaabaa geedi socodka isbadalka.
Masiixiyiinta Masiixiyiinta ahi waxay leeyihiin saddex weji oo kuwanu dhammaantood ma muujinayaan mar qudha.
U beddelashada ilaahay (dib ayaan ugu noqonaynaa Eebbe).
U beddelashada kaniisadda (Jacaylka loo qabo Masiixiyiinta kale).
Beddelidda / u jeesashada adduunka (dib ayaan u soo noqonnay oo aan dibadda u nimid).
Goorma ayaa la beddelayaa?
Isbeddelku ma laha oo keliya saddex weji, waxa kale oo uu leeyahay saddex weji:
Waxaan ku beddelanay ka dib go'aankii Ilaah ee Aabaha, ka dib markii naloo doortay inaan jeclaano Masiixa intaan dunidan la aasaasin (Efesos 1: 4-5). Diinta Masiixiyiintu waxay ku xidhnayd jacaylka la doortay ee Ilaah, oo ah kan og dhamaadka dhamaadka bilowga iyo talaabadiisa waxqabadka (Jawaab) had iyo jeer waa ka hor.
Waxaan beddelnay markii Masiixu iskutallaabta ku dhintay. Taasi waxay ahayd dib-u-noqoshadii ugu dambaysay ee bina-aadamnimada xagga Ilaah markii darbigii qaybsanaanta dembigu kala dillaacay (Efesos 2: 13-16).
Waxaan beddelnay markii Ruuxa Quduuska ahi run ahaantii na ogeysiiyay waxyaabo oo aan uga jawaabnay iyaga (Efesos 1: 13).